ပလေးစတေရှင် ၂ - ဝီကီပီးဒီးယား
(PlayStation2မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဘယ်ဖက်: မူလ ပလေးစတေရှင် ၂
ညာဖက်: ပိုမိုပါးလွှာသော ပလေးစတေရှင် ၂၊ 8 MB မှတ်ဉာဏ်ကဒ်နှင့် DualShock2အမျိုးအစား လက်ကိုင်ခလုတ်
၄ မတ် ၂၀၀၀
JPN ၂၀၂၀၀၃၀၄မတ် ၄, ၂၀၂၀
NA ၂၀၀၀၁၀၂၆အောက်တိုဘာ ၂၆, ၂၀၀၀
EU ၂၀၀၀၁၁၂၄နိုဝင်ဘာ ၂၄, ၂၀၀၀
AUS ၂၀၀၀၁၁၃၀နိုဝင်ဘာ ၃၀, ၂၀၀၀
KOR ၂၀၀၂၀၂၂၂ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂, ၂၀၀၂
IND ၂၀၀၃၀၈၁၃ဩဂုတ် ၁၃, ၂၀၀၃
CHN ၂၀၀၃၁၂၂၀ဒီဇင်ဘာ ၂၀, ၂၀၀၃
NGA ၂၀၀၈၀၇၀၂ဇူလိုင် ၂, ၂၀၀၈
BR ၂၀၀၉၁၁၁၈နိုဝင်ဘာ ၁၈, ၂၀၀၉
EU ၂၀၀၄၁၀၂၉အောက်တိုဘာ ၂၉, ၂၀၀၄
JPN ၂၀၀၄၁၁၀၃နိုဝင်ဘာ ၃, ၂၀၀၄
NA ၂၀၀၄၁၁နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၄
AUS ၂၀၀၄၁၁နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၄
JPN December 28, 2012
၁၅၅ သန်း (၃၁ မတ် ၂၀၁၂)
ပလေးစတေရှင် ၂ မန်မိုရီကဒ် ၈ မီဂါဘိုက်
ပလေးစတေရှင် မန်မိုရီကဒ် (၁၂၈ ကီလိုဘိုက်/၁ မီဂါဘစ်)
၄၀ ဂီဂါဘိုက် ဟတ်ဒစ်စ် ဒရိုက်ဗ် (ထပ်ပေါင်းပစ္စည်း)
100 Mbit Ethernet/modem(requires adapter on SCPH-10000-500xx models),2× USB 1.1, 1 × IEEE 1394 interface
Grand Theft Auto: San Andreas: ၂၀.၈၁ သန်းရောင်းချရပြီး(as of April 2014)
ပလေးစတေရှင် ၂ (PlayStation 2) သည် ဆိုနီ ကွန်ပျူတာ ဖျော်ဖြေရေး (Sony Computer Entertainment)မှ ထုတ်လုပ်သော ပလေးစတေရှင်အုပ်စုဝင် ဒုတိယမြောက် ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး နောက်နှစ်တွင် မြောက်အမေရိကနှင့် ဥရောပသို့ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ခြောက်ခုမြောက် ဂိမ်းစက်မျိုးဆက်အဖြစ် ဆီဂါ၏ ဒရင်းကပ်စ်၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ အိပ်စ်ဘောက်စ်နှင့် နစ်တန်းဒိုး၏ ဂိမ်းကျူ့ စက်များဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
ပလေးစတေရှင် ၂ ဂိမ်းစက်ပေါင်း ၁၅၅ သန်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်သမိုင်းတွင် အရောင်းရဆုံးသောဂိမ်းစက် အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ပလေးစတေရှင် ၂ ဂိမ်းစက်နှင့် တွဲဖက်ကစားရန် ဂိမ်းပေါင်း ၃၈၇၀ ကျော် ထွက်ရှိထားပြီး ဂိမ်းအချပ်ရေ ၁.၅ ဘီလီယံကျော် ရောင်းချထားပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုနီမှ နောက်ပိုင်းတွင် မူလ ပလေးစတေရှင် ၂ ဂိမ်းစက်ထက် ပိုမိုပါးလွှာသော slimline မော်ဒယ် ပလေးစတေရှင် ၂ အမျိုးအစားကို ထပ်မံဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပလေးစတေရှင် မျိုးဆက်သစ် ဂိမ်းစက်ဖြစ်သော ပလေးစတေရှင် ၃ (PlayStation 3) ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ပလေးစတေရှင် ၃ ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ပလေးစတေရှင် ၂ အနေဖြင့် ခြောက်ခုမြောက် ဂိမ်းစက်မျိုးဆက်တွင် နာမည်ကျော်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဖြန့်ချိပြီး ၁၃ နှစ်ခန့်၊ ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင် ဆိုနီမှ ပလေးစတေရှင် ၂ ဂိမ်းစက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိမှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
↑ プレイステーション2の日本国内での出荷が本日（2012年12月28日）で完了 (in Japanese)။ Famitsu။ Enterbrain (December 28, 2012)။ December 28, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sony stops shipping PlayStation2units in Japan။ Rappler (December 29, 2012)။ August 4, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shiloy၊ Anton (26 February 2007)။ Sony Removes Emotion Engine, Graphics Synthesizer from PAL PlayStation 3။ X-bit labs။7May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ John L. Hennessy and David A. Patterson. "Computer Architecture: A Quantitative Approach, Third Edition". ISBN 1-55860-724-2
↑ Keith Diefendorff. "Sony's Emotionally Charged Chip". Microprocessor Report, Volume 13, Number 5, April 19, 1999. Microdesign Resources.
↑ Guinness World Records 2009 Gamer's Edition, 108–109. ISBN 1-904994-45-8။ “GTA: San Andreas is the best-selling PlayStation2game, withamassive 17.33 million copies sold.”
↑ PLAYSTATION2 sales reach 155 million units worldwide။ Sony Computer Entertainment (February 14, 2011)။ February 14, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Makuch၊ Eddie (February 15, 2011)။ 155 million PS2 units shipped worldwide – News at GameSpot။ Asia.gamespot.com။ March 27, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပလေးစတေရှင်_၂&oldid=396532" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၀၇:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။